Izindaba - I-China ngumthengisi omkhulu wezingubo, kepha insalela yokuhweba iyancipha
Njengomthengisi omkhulu wezingubo, iChina ithumela ngaphezulu kwezingubo eziyizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ minyaka yonke, okungaphezulu kakhulu kokungeniswa kwayo ezweni. Kodwa-ke, ngokuguqulwa kwesakhiwo sezomnotho saseChina eminyakeni yamuva nje, imboni yezingubo iye yangena kancane kancane esigabeni esivuthiwe, futhi imikhakha yomkhiqizo iye yanothisa kancane kancane, insalela yokungenisa nokuthekelisa yaseChina incipha kancane kancane.
Kusukela ngo-2014 kuya ku-2019, isikali sokuthekelisa ingubo yaseChina siyehla kancane kancane. Ngokwezibalo ezivela kuGeneral Administration of Customs, ngonyaka we-2018, inani lokuthunyelwa kwezingubo nezinsimbi zaseChina kwakungu-US $ 157.812 billion (laguqulwa lisuselwa kusilinganiso sokushintshaniswa sedola-RENMINBI senyanga ehambisanayo), lehla ngo-0.68% unyaka nonyaka. Kusukela ngoJanuwari kuya kuMeyi 2019, inani elithunyelwa ngaphandle lezingubo nezesekeli zaseChina lalingu-US $ 51.429 billion, kwehle ngo-7.28% unyaka nonyaka.
Kusukela ngo-2014 kuya ku-2019, ukungeniswa kwezingubo eChina kukhule ngokushesha. Ngokwezibalo ezivela kuGeneral Administration of Customs, ngonyaka we-2018, inani lokungeniswa kwezingubo nezinsimbi zaseChina lalingama-8.261 billion amadola aseMelika, enyuka ngamaphesenti ayi-14.80 ngonyaka. Kusukela ngoJanuwari kuya ku-Ephreli 2019, inani lokungeniswa kwezingubo zokugqoka zaseChina kanye nezesekeli kwakungu-US $ 2.715 billion, kukhuphuke ngo-11.41% unyaka nonyaka.
Imboni yezingubo yaseChina ithunyelwa kakhulu e-EU, e-US, e-ASEAN naseJapan. Ku-2018, ukuthunyelwa kwezingubo eChina e-EU kufinyelele kuma-dollar aseMelika angama-33.334 billion, kwalandela i-US neJapan ngama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-32.153 kanye nase-15.539 billion amadola aseMelika, ngokulandelana. Kusukela ekuthambekeni kweminyaka yamuva nje, ukuthunyelwa kwezingubo eChina e-United States naseJapan sekuphinde kwaqala ukukhula, ngenkathi ukwehla kokuthunyelwa kwamanye amazwe okuya e-European Union kunciphile, futhi ukuthunyelwa kweChina emazweni athile kulayini we "One Belt And One Road" ukukhula okuhle. Ku-2018, ukuthunyelwa kweChina eVietnam naseMyanmar kukhuphuke ngaphezu kwamaphesenti angama-40, kanti ukuthunyelwa eRussia, eHong Kong nase-European Union kwehle ngamaphesenti ayi-11.17, amaphesenti angu-4.38 kanye namaphesenti angu-0.79 ngokulandelana.
Ngokombono wemikhiqizo yokuthekelisa, ngokusho kwezibalo ezingaba khona, phakathi kwezinhlobo ezingama-255 zezingubo ezithunyelwa yiChina ngo-2018, inani eliphelele lokuthekelisa lemikhiqizo ephezulu engu-10 lalingaphezu kwamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-48,2, okubalwa cishe ngama-30% okuthekelisa okuphelele inani. Phakathi kwabo, "i-chemical fiber knitted crochet pullovers, i-cardigans, ivesti, njll." bekulokhu kungumkhiqizo othunyelwa kakhulu, ngenani lokuthekelisa lalo mkhiqizo lifinyelela kumadola ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.270 ngonyaka ka-2018.
Kusukela ngoJanuwari kuya ku-Ephreli 2019, imboni yezimpahla yezingubo ephezulu eyi-10 yaseChina ifinyelele kuma-dollar ayi-11.071 aseMelika